ပရိတ်သတ်တြေ ထင်ယောင္ထင္မွာျးဖစ်စေမယ့် သူမတို့လင္မယားရဲ့ သတင်းတုတြေကိုျေဖရွင်းလိုက္တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Oscar
March 24, 2021 By L YC Celebrity
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု တို့ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်း ကနေ အခုချိန်ထိ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေကြသူ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော အခြေအနေများကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရ ပေမယ့်လည်း နေ့စဉ် ရက်ဆက် သတင်း အချက် အလက်များအား သူမ ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ဝေ မျှပေးနေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိမ်းရှောင်နေ စဉ်အတောအတွင်း သူမတို့ ဇနီးမောင် နှံ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော့ ကောလ ဟာလ များစွာ ထွက်ရှိနေ တာကြောင့် မကြာ သေးခင် နာရီပိုင်းလောက်က သုသု ရဲ့ Facebook အကောင့် တွင် ပြန်လည် ဖြေရှင်းလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” အခြေ အမြစ် မရှိတဲ့ page နဲ့ websiteမှာ ပိုင်ဖြိုးသု ကပြောကြားလာပါတယ် ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့ သတင်းတွေ့လိုက်လို့ပါ….သူရေးထားတာ ကလည်းတကယ်ကိုယုံလောက်စရာ အကွက်ကျကျ ဇာတ်လမ်းဆင် ရေးထားတာပါ…အခုဒီမှာအဲဒီ့ interview ရဲ့ link ကို မထည့်ပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်မထည့်ပေးလိုက်မှအဲဒီ့ page အခုထက် reach ကောင်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ….(လက်ရှိတောင်သူ့ postက share 5.7K )ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ နဲ့ကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်‌စေမယ့်ခေါင်းစဉ်တပ် ရေးထားတာပါ…
အဲဒီ့post အောက်မှာ ဝိုင်းဝန်း စွပ်စွဲပြောဆိုထားသူ များကိုလည်း မေးချင်လို့ပါရှင်…ကျွန်မတို့ လင်မယားက ဒလန်တွေ ဆိုရင် ဝရမ်း ထုတ်ခံရပါ့မလား??? ကျွန်မတို့သာ အမှန်တရားဘက်က မရပ်တည်ချင်ရင် အသာလေးရေ လိုက်ငါးလိုက် ရေသာခိုနေ ကြမှာပေါ့ရှင်…(အဲ့သလို နေနေကြသူတွေလည်းရှိနေတာပဲ)အများ စိတ်ဆင်းရဲနေ ရချိန်မှာ ကိုယ့်ဒုက္ခတွေ မဝေမျှချင်ပေမယ့် ဒီတစ်ခုတော့ အတိအကျကျွန်မပြောပါရစေ…ကျွန်မပိုင်ဖြိုးသု သည် မည်သည့်အသွင်ပြောင်း mediaအတု pageအတုကိုမျှ interviewဖြေကြားထားခြင်း မရှိပါ…အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မှ ဝရမ်းပြေးဘဝ အတွေ့ကြုံများဆိုပြီး တစ်ရက် သက်သက်ပြောပြရဦးမယ်….” ဆိုပြီး လက်ရှိ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလ ဟာလ သတင်းအတု တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းလာတာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ လည်း သိရှိစေရန်အတွက် တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသု တို့ ဇနီးမောငျနှံ ကတော့ ဖဖေျောဝါရီလ အစပိုငျးကတညျး ကနေ အခုခြိနျထိ လူထု လှုပျရှားမှုတှေ မှာ ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ တကျကွှစှာ ပူးပေါငျး ပါဝငျနကွေသူ တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလော အခွအေနမြေားကွောငျ့ တိမျးရှောငျနရေ ပမေယျ့လညျး နစေ့ဉျ ရကျဆကျ သတငျး အခကျြ အလကျမြားအား သူမ ရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာမှ တဈဆငျ့ ဝေ မြှပေးနေ တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ တိမျးရှောငျနေ စဉျအတောအတှငျး သူမတို့ ဇနီးမောငျ နှံ နဲ့ ပတျသတျပွီး တော့ ကောလ ဟာလ မြားစှာ ထှကျရှိနေ တာကွောငျ့ မကွာ သေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျက သုသု ရဲ့ Facebook အကောငျ့ တှငျ ပွနျလညျ ဖွရှေငျးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
” အခွေ အမွဈ မရှိတဲ့ page နဲ့ websiteမှာ ပိုငျဖွိုးသု ကပွောကွားလာပါတယျ ဆိုပွီးတငျထားတဲ့ သတငျးတှလေို့ကျလို့ပါ….သူရေးထားတာ ကလညျးတကယျကိုယုံလောကျစရာ အကှကျကကြ ဇာတျလမျးဆငျ ရေးထားတာပါ…အခုဒီမှာအဲဒီ့ interview ရဲ့ link ကို မထညျ့ပေးဘူးဆိုတာ ကြှနျမထညျ့ပေးလိုကျမှအဲဒီ့ page အခုထကျ reach ကောငျးသှားမှာ စိုးလို့ပါ….(လကျရှိတောငျသူ့ postက share 5.7K )ရညျရှယျခကျြ ရှိရှိ နဲ့ကို ထငျယောငျထငျမှားဖွဈ‌စမေယျ့ခေါငျးစဉျတပျ ရေးထားတာပါ…
အဲဒီ့post အောကျမှာ ဝိုငျးဝနျး စှပျစှဲပွောဆိုထားသူ မြားကိုလညျး မေးခငျြလို့ပါရှငျ…ကြှနျမတို့ လငျမယားက ဒလနျတှေ ဆိုရငျ ဝရမျး ထုတျခံရပါ့မလား??? ကြှနျမတို့သာ အမှနျတရားဘကျက မရပျတညျခငျြရငျ အသာလေးရေ လိုကျငါးလိုကျ ရသောခိုနေ ကွမှာပေါ့ရှငျ…(အဲ့သလို နနေကွေသူတှလေညျးရှိနတောပဲ)အမြား စိတျဆငျးရဲနေ ရခြိနျမှာ ကိုယျ့ဒုက်ခတှေ မဝမြှေခငျြပမေယျ့ ဒီတဈခုတော့ အတိအကကြှနျမပွောပါရစေ…ကြှနျမပိုငျဖွိုးသု သညျ မညျသညျ့အသှငျပွောငျး mediaအတု pageအတုကိုမြှ interviewဖွကွေားထားခွငျး မရှိပါ…အရေးတျောပုံကွီးအောငျမှ ဝရမျးပွေးဘဝ အတှကွေုံ့မြားဆိုပွီး တဈရကျ သကျသကျပွောပွရဦးမယျ….” ဆိုပွီး လကျရှိ ပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ကောလ ဟာလ သတငျးအတု တှနေဲ့ပတျသတျပွီး ပွနျလညျ ဖွရှေငျးလာတာ ကွောငျ့ ပရိသတျတှေ လညျး သိရှိစရေနျအတှကျ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူ တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။
စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကြေးလေးတွေနဲ့ လှိုင်သာယာက ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းနေတဲ့ ညီညီမောင်